Muqdisho: 7; Qof oo isku qoys ah oo ku dhintay Dab ka kacay Gurigooda – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAMuqdisho: 7; Qof oo isku qoys ah oo ku dhintay Dab ka kacay Gurigooda
Muqdisho: 7; Qof oo isku qoys ah oo ku dhintay Dab ka kacay Gurigooda
Ugu yaraan 7; Qof ayaa geeriyootay kaddib markii xalay gelinkii dambe uu dab ka kacay Guri ay ka degganaayeen Degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho.
Dadka dhintay waxaa ay isugu jiraan Hooyo iyo 6; Carruur ah oo ay dhashay,waxaa sidoo kale uu dhaawac soo gaaray Odaygii Guriga.
Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamewd Tuulax ayaa sheegay in ay xalay goor dambe u gurmadeen Guriga uu dabka ka kacay ee ay dadkaasi ku dhinteen.
Waxaa uu sheegay in Nasiib darro dadka degganaa Guriga ay intooda badan Geeriyoodeen kaliyana uu ka bad baaday Odayga Guriga oo isugba dhaawac ah.
Ilaa hadda ma jirto cid xaqiijisay waxa sababay dabkaasi ay ku nafwaayeen todobada Qof oo isku qoyska ahaa ee xalay ka kacay Degmada Yaaqshiid.
Tuulax,ayaa sheegay in ay ku dadaaleen xakameynta dabka si uusan ugu fidin xaafadaha kale ee ka agdhaw khasaaruhuna uusan uga badan inta uu hadda yahay.
Waxaa uu Tacsi u diray ehelka iyo Qaraamada ay ka baxeen Qoyska ku geeriyooday dabka ka kacay Gurigooda ee Degmada Yaaqshiid.
Taliye ku xigeenka Daraawiishta Puntland oo is casilay
52,831 total views, 718 views today
52,831 total views, 718 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
52,901 total views, 718 views today
52,901 total views, 718 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
52,912 total views, 718 views today
52,912 total views, 718 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
52,934 total views, 719 views today
52,934 total views, 719 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
52,972 total views, 719 views today
52,972 total views, 719 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]